Umdwebo onomunyo wamashiya kuyindlela yezinwele nge-shading. Indlela yokunakekela amashiya emva kokudweba imibala?
Umdwebo onomunyo wamashiya - ubuchwepheshe bemvelo yemvelo
I-make-up ayilungile ngaphandle kwamashiya ahlanza kahle. Le nkinga ayithinti kuphela ukuveza nokulinganisa ubuso, kodwa futhi inquma "umbala" wayo ngokomzwelo. I-tattoo yezinwele zamashiya ubuchwepheshe obusiza ukulungisa ukugoba nokuma kweshiya ukuze kuvele ukubukeka okukhangayo, okuhambelana.
Yini engcono - ama-microblooding noma ama-tattoo we-eyebrow?
Abesifazane abafuna ukwenza izimonyo zesikhathi eside isikhathi eside ukuze banakekele nsuku zonke, gcina isikhathi futhi bahlale beqiniseka ekupheleleni kokubukeka, okuvame ukuhlukunyezwa ngumbuzo: iyiphi indlela yokukhetha? Muva nje, kwabesifazane abakhetha ukwakheka kwemvelo kuningi, umbuthano wokuzikhethela uye wafinyelela kumasu amabili athandwayo - izinwele zezinwele kanye ne-microblasting, okuvela kuwo okumele ukhethe into eyodwa.
I-tattoo yamashiya ngendlela yokuboya inqubo yinkambiso lapho umbala obonakalayo uhlanganiswa khona ngendlela engezansi kwe-epidermis, hhayi ngolayini oqhubekayo, kodwa ngesimo samathanga amancane omzimba alingisa amashiya emvelo. Le ndlela yenziwa ngedivaysi ekhethekile enezinaliti eyodwa noma ngaphezulu ezihlangene ngensimbi ejikelezayo ekugcineni.
I-microblooding yindlela ephansi yokuthungatha umdwebo onobuchopho obunamehlo, lapho kusetshenziselwa khona ngesandla usebenzisa isibambo se-manipulator esinezinaliti ezifakwe emgqeni ngesimo se-spatula. Kulokhu, futhi, udonsela "izinwele", kodwa ukunyakaza ngalunye kulawulwa yi-master. Ngaphezu kwalokho, ukudweba i-hardware ye-hardware kanye ne-microblooding umehluko kunalokhu okulandelayo:
nge-microblasting, ukujula kokungena kwezinaliti kungaphansi kwezinwele zezinwele, ngakho isikhumba singalimala kabi futhi siphulukisa ngokushesha;
Ubuchwepheshe be-hardware buhambisana nokudlidliza okudalwe idivayisi, okuyinkimbinkimbi inqubo;
ukudala ukuma kwamashiya ngokusebenzisa microblasting manual kunikeza ukucabangela ukukhululeka kwe-arch iso, kuyilapho idivaysi engashiyi lelo thuba;
nge-microblasting, ingozi ye-blurriness ne-streaks iyanciphisa;
ukuphikelela komphumela we-hardware indlela kuphakeme kunendlela yokusebenza, futhi ukulungiswa kuyadingeka kaningi;
inqubo yezobuchwepheshe idinga ukuqeqeshwa okungeziwe kanye nenkosi engcono kakhulu, iyabiza kakhulu.
Uthini umdwebo we-tattoo wezinwele ubheke?
Ukudweba izinwele kusiza ukwakha isimo esihle samashiya, ukugcwalisa ngokungenakuqhathaniswa ama-microsections angenalutho ("ama-patches ama-bald") anezintambo ezilimazayo. Ngenxa yalokhu, ukubonakala kwamashiya amakhulu, ukugoba amahle nobude bomugqa odinga ukulinganisa ubuso bombuso, umphumela wokuvuselela udalwa. Kulokhu, i- tattoo yezinwele zamashiya inika umphumela wemvelo kangangokuthi kunzima ukubona "inkohliso" ngisho eduze.
Izinzuzo kanye nokuqothula kwezinwele zezinwele zamashiya
Uma uhlela amashiya we-tattoo, indlela yezinwele ezimweni eziningi kuyoba yindlela engcono kakhulu yokuthola umphumela osondelene nemvelo. Izinzuzo zale nqubo:
ikhono lokulungisa ukungafaneleki, ukuqondisa nokuqina kwamashiya;
ukulungiswa kombala we-eyebrow;
ukulungiswa kwe-asymmetry yamashiya;
kungenzeka ukufihla izibazi;
umphumela ohlala njalo.
Kubalulekile ukuphawula kanye nokushiyeka okuthile, okuphethe i-tattoo ubuchwepheshe bezinwele zekhanda:
isikhathi eside sokuvuselelwa;
Kudinga ukulungiswa inyanga eyodwa emva kwenqubo;
ingozi yokubunjwa kwesikhumba esikhumbeni ngemuva kwezinqubo eziningi;
Ukungakwazi ukubuyisela masinyane amashiya ekubukeni kwasekuqaleni uma kwenzeka umphumela ongaphumelelanga.
Kungakanani umdwebo we-eyebrow wezinwele?
Ubude obude bokulondolozwa komphumela, okwenza ukudweba amashiya ngendlela yezinwele, kusuka ngonyaka owodwa kuya eminyakeni engu-3-5. Kuncike ezintweni eziningana:
ubudala (esikhumbeni esikhulile ngenxa yokulibaziseka kwe-metabolism kuzohlala isikhathi eside);
umdwebo wepende (ithoni elimnyama ligezwa kancane kancane);
uhlobo lesikhumba (esikhumbeni samafutha umphumela awuphikisi kancane futhi emva kwesikhathi imivimbo ingase ibukeke ingcolile).
Amashiya okudweba izinwele kanjani?
Ubude benkambiso okungenani ihora elilodwa. Esikhathini sokulungiselela, inkosikazi ichaza imininingwane yomthengi wombono womphumela wokuphela, izifiso zakhe futhi ihlinzeka ngokhetho lwakhe, ukuhlola zonke izinombolo ezidingekayo zokukhetha uhlobo oluhle lomhlobiso:
ububanzi nokuphakama kwebunzi;
indawo yama-supercadeary arcs;
ukuchotshozwa kanye nendawo yamehlo;
ubuso bomumo, njll.
Ukunyathelisa amanxephezi amaningi ngekhanda lobuchwepheshe kwenziwa ngezinyathelo ezilandelayo:
ukuqokwa komjikelezo wamashiya ngepensela, umdwebo;
i-anesthesia yendawo kanye nesifo socansi;
ukugcwaliswa kwezixhobo ngepende ekhethiwe nokwenza imibala;
ukusetshenziswa kwe-anesthetic endaweni ephathwayo.
Hair ubuchwepheshe tattoo iphequluli
I-Voloskovy tattoo yemvelo yamashiya ihlukaniswe ibe yizinguqulo ezimbili, ezihlukile endleleni yokubulawa:
I-European - ihlanganisa ukudweba izinwele zezinwele ezilingana nobude obufanayo, ngokulandela isiqondiso esisodwa ngokulandelana kanye nokushintsha isimo sokuthambekela kuphela ekugcineni nasekupheleni kwamashiya;
izinwele zempumalanga - izinwele zamasheya, umphumela wayo osondelene nefomu lemvelo, elifezwa ngenxa yokwenziwa kwemivimbo yobude obuhlukene, ubukhulu, ukuqondisa.
I-tattoo ye-eyebrow - izinwele zobuchwepheshe ezine-feathering
Ngaphezu kwalezi zindlela ezingenhla, ukudweba kwezinwele zamashiya ane-feathering kuphakanyisiwe. Le nqubo iyinhlanganisela ye-tattoo yezinwele zakudala enomdwebo wezinhlanzi nokuvuthwa, lapho i-pigment ifakwe ngaphansi kwesikhumba phakathi kwezinwele, okudala umphumela wokugqoka amashiya ngemithunzi noma ipensela. Ukudweba okunomsoco wamashiya nge-feathering kunconywa kwabesifazane abanamashiya alula kakhulu noma angavamile, phambi kwezimo ezihlukahlukene zesikhumba esifundeni sezingqimba ze-superciliary.
Umdwebo onomunyo wamashiya - ukulungiswa
Ngemva kokwenza i-tattoo yezinwele ezihlala njalo, ngemva kwenyanga benza ukulungiswa. Lokhu kuyadingeka ukulungisa ezinye amaphutha kanye neziphambeko ezibangelwa ukuhlukumezeka nokuphulukiswa kwezicubu, nokuletha umphumela ekupheleleni. Ngokuvamile ngemuva kokuvuselelwa kwesikhumba, ukuqina kombala ku-20-70%. Ngesikhathi sokulungiswa, idijithali ineza ukukhanya, isebenza ezindaweni lapho idayisi "ingabambeli". Esikhathini esizayo, inqubo yokuvuselela ukugcina umphumela inconywa ukuba yenziwe njalo ezinyangeni eziyi-8-10, njengoba i-pigment icacisiwe.
Indlela yokunakekela amashiya emva kokudweba imibala?
Ukuvuvukala, ubomvu, igazi kanye ne-syrups kusuka emanxebeni, izivunguvungu ezincane - izinto ezivamile emva kokudweba imibala. Isikhumba endaweni yezokwelapha sishaya kancane kancane, sishaya, kancane kancane sakha i-crust engakwazi ukuqedwa (izovela yedwa ngesonto kamuva). Ngaphezu kwalokho, njengoba sekuqhutshwa indlela yezinwele zokudweba umculi, akuvunyelwe:
thinta amashiya, uwafake bese uwahlanza (kungakapheli isonto);
Ukuvakashela i-sauna, ibheji yokugeza, ichibi lokubhukuda, ibhishi, i-gym (kungakapheli inyanga);
Sebenzisa izimonyo zokuhlobisa, ama-scrubs, masks endaweni yashiya kuze kuphele ukuphulukiswa okuphelele.
Ngesikhathi sokuphumula, sebenzisa ukhilimu we-antiseptic noma amafutha okugcoba ukuze usebenzise amajoni ukuvimbela ukutheleleka. Ukucubungula isikhumba kuyadingeka ngokunembile kakhulu. Esikhathini esizayo, ukuze ulondoloze isimo esihle sezikhonkwane, udinga ukusebenzisa izinhlanzi, ususe izinwele eziphumayo, futhi uvikele ubuso bakho kusuka ekukhanyeni kwe-ultraviolet, usebenzisa isikrini selanga.
Lichen elibomvu flat emgodini womlomo
I-pimple yangaphakathi ebusweni - indlela yokukhipha?
Ukususwa kwemikhumbi ebusweni nge-laser
Kuyini i-Botox, kanjani ukujova kwe-botulinum toxin ku-cosmetology nemithi?
Ubuso bombuso ngelamula
Ungasusa kanjani ama-freckles ekhaya?
Ikhekhe lesiponisi ngobisi oluncibilikile
I-Currumbin Nature Reserve
Ukuqina kwe-nail polish
Omagazini abahamba phambili benqaba ukusebenza nomdwebi wezithombe uTerry Richardson ngenxa yokuhlukunyezwa ngokobulili
Ukumiswa kwemisindo kwezingxenye ze-plasterboard
Izingubo zezimvu zika-2015
Amacici - ama-novelties amafashini
Ingakanani ingane ilele ezinyangeni ezingu-3?
Inja ebiza kakhulu